महिना बितेपछि घर भाडा कसरी तिर्ने ? पैसा सक्किसक्यो के खाने ? कलेज, युनिभर्सिटीको फी तिर्न बाँकी नै छ । साइप्रसमा अध्ययनका लागि आएका नेपाली विद्यार्थीहरु अहिले यस्तै मानसिक तनावमा छन् ।
← न्युयोर्कमा रहेका नेपालीलाई नेपाली स्वयंसेवकको सहयोग
अस्ट्रेलियाका नेपाली विद्यार्थीको गुनासो : कलेजले फी मागेर हैरान बनायो →
Total Visit : 14263